Qaramada Midoobay ayaa Dusha ka saaray Ethiopia Xasilooni darrada siyaasada ee Soomaaliya.
Sunday December 01, 2019 - 09:57:44 in News by Silfer Silver
Ethiopia waxaay saameen adag ku leedahay xaaladaha siyaasadeen wadamo aay ka mid yihiin Soomaaliya.
Laba warbixin oo ay soo saareen Guddiga Khubarada QM ayaa Abiy ku eedeeyey inuu xasilooni darro ka abuurayo South Sudan iyo Somalia, oo ah laba dal oo uu arrimahooda gudaha aad ugu lug leeyahay, sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee Nairobi.
Eedeymahan ayaa imanaya ayada oo Madasha Xisbiyada Qaran, iyo maamulka Jubaland ay ku eedeeyeen ciidamada Itoobiya inay dowladda Farmaajo ka caawinayaan inay faro-geliso arrimaha maamul goboleedyada.
Dhinacyadan ayaa sheegaya in Ethiopia ay ciidamo aan Amisom ka tirsaneyn kusoo daabuleyso Soomaaliya, si ay u fuliyaan hadafyada madaxweyne Farmaajo uu kula wareegayo maamul goboleedyada.
Safiirka Itoobiya ee Kenya Meles Alem, oo la hadlay Daily Nation ayaa sheegay in eedeymahan aysan xaqiiq ahayn.
"Mid ka mid ah tiirarka siyaasadda arrimaha dibedda Itoobiya ayaa ah inaan la faro-gelin arrimaha gudaha ee dalalka kale. Taas waa taariikhdeena,” ayuu yiri.
"Waxaan si deris wanaag ah u cayaarnaa kaalin aan wax ku dhiseyno kaliya.”
Meles ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ee nabad-ilaalinta ay dalalka kale, oo Soomaaliya ay ku jirto, u joogaan hanaan nabadeed oo kaliya, islamarkaana ay raacaan xeerarka caalamiga ah.
Ciidamada Itoobiya ayaa bishii December ee sanaddii 2018, waxay ayaga oo ay wehliyaan ciidamada Soomaaliya shacab ku xasuuqeen magaalada Baydhaba, si doorashadii madaxweynaha Koonfur Galbeed loo xaqiijiyo inuu kusoo baxo musharaxii dowladda ee Cabdicasiis Lafta-gareen.
Ka hor inta aan bishii Febraayo eee sanaddii 2017 loo dooran madaxweynaha Soomaaliya, Farmaajo waxa uu ahaa siyaasi Soomaalida ka gaday inuu neceb yahay shisheeyaha, gaar ahaan Itoobiya.
Waxa uu marar badan wareysiyo uu bixiyey ku sheegay in Itoobiya ay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliya, islamarkaana aysan ahayn in marna ciidankooda ay joogaan Soomaaliya.